Ngwa Ngwá Ọrụ Web - Ntụziaka Semalt
Nchapu (Google Chrome ndọtị)
Ụdị ndị na-abụghị programmers na freelancers na-ahọrọ ọkachamara n'ihi na ya enweghị njedebe data scraping. Ihe omume sayensi a na-eduzi GUI nwere ike wepu ma ibe weebụ ma buru ibu ma nwee nnukwu igwe na-enweta nkà na ụzụ iji mee ka ọrụ gị dị mfe. A na-ahazi ikpo okwu a iji wepụ data site na Amazon, eBay, na ebe ndị ọzọ yiri ya ma nwee ihe nchọpụta nke nchọpụta spam . Na ya, ị nwere ike ịchọpụta spam na data gị ma nwee ike iwepụ ya n'ime nkeji ma ọ bụ abụọ. O nwere otu ebe Google API ahịa maka inweta nbudata nke oma ma zoputa ozi gi na nchekwa data ya. Ịnwekwara ike ịchekwa data na draịvụ ike gị ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla ọzọ ịhọrọ.
Na mbubata. Ee, ịkwesighi ịdị na-arụ ọrụ nke ọma ma nwee ike ịchọta data dị elu na mgbe niile. Ngwa ngwa ntinye weebụ a ekwuola na ọ kwụsịrị mkpa maka ndị na-abụghị onye mmemme na ndị ọkà mmụta sayensị data. Dị ka anyị maara na sayensị data chọrọ ọnụ ọgụgụ na mgbakọ na mwepụ, mmemme mmemme, mana ịkwesighi ịmụta ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-eji mbubata. Ee. Ngwaọrụ a bara uru maka ma ndị mmadụ ma ụlọ ọrụ.
Kimono Labs bụ ihe ntanetị nke na-emeghe ihe ntanetị weebụ. Ọ nwere ike wepu data site na ọtụtụ ọnụọgụ saịtị n'ime nkeji. Ọ na-abata na nsụgharị na n'efu ma na-akwụ ụgwọ ma kwadoro maka ndị mmadụ na-abụghị ndị ọrụ aka. Na Kimono Labs, ịkwesighi ịmụta Python ma ọ bụ asụsụ ọ bụla ọzọ. Ngwurugwu crawlers bu ụzọ nyere gị aka ịdekọ data gị ma ọ bụ ibe weebụ dị iche. Naanị ị ga-ebudata ma malite usoro a wee hapụ Kimono Labs nyochaa data maka gị na nkeji nkeji. Mmiri ume ya nke igwe ojii na-ahapụ gị ịkekọrịta ozi n'etiti ngwaọrụ dị iche iche ngwa ngwa na ngwa ngwa. Kimono Labs na-eji ụlọ ọrụ, ndị nta akụkọ, ndị na-ere ahịa n'Ịntanet, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na freelancers na nnukwu ụlọ ọrụ.
Facebook na Twitter APIs
Nnukwu data bụ nsogbu dị mkpa maka ọtụtụ webmasters na ndị na-abụghị ndị ọkachamara. Ya mere, ha na-ejikarị Twitter na Facebook API iji nweta data ha. API na-enyere anyị aka wepụ ozi bara uru site na weebụsaịtị na blọọgụ dị iche iche, ma na-eme amụma gbasara otu esi dezie na chekwaa data ozugbo ọ na-efopụ ya kpamkpam. Nke kachasị mma bụ na API nwere ike ịnweta ngwa weebụ m n'ụzọ dị mfe, n'usoro a pụrụ ịdabere na ya. Ha na-enye ihe ngosi nke ọma nke data ndị a na-ehichapụ, wepụta ya n'ime edemede dịgasị iche, ma ọ bụ bubata n'ụdị dịgasị iche iche dịka ọchịchọ na ọchịchọ anyị si dị. Ị ga-eji API ndị na-elekọta mmadụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-enweghị ọrụ na-enweghị mmemme mmemme Source .